सिमेन्टको माग बढिरहन्छ, हामी वर्षदिनमै मार्केट लिडर बन्छौं
मुकुन्द घिमिरे, महाप्रबन्धक (सेल्स एन्ड मार्केटिङ), रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट
२०७५ चैत २६ मंगलबार ११:२०:००
काठमाडौं । मल्टिनेसनल कम्पनीमा लामो समय बिताइसकेका मुकुन्द घिमिरे हाल रिद्धिसिद्धि सिमेन्टको महाप्रबन्धक (सेल्स एन्ड मार्केटिङ) हुन् । घिमिरेसँग युनिलिभर नेपालमा सेल्स म्यानेजरको रुपमा काम गरेको २५ वर्षको अनुभव छ ।
शंकर ग्रुप र अम्बे ग्रुपको संयुक्त लगानीमा रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट खुलेको हो । सिमेन्टको कारखाना हेटौंडामा छ । २०७३ सालमा स्थापित कम्पनीले केही समयअघिदेखि मात्र उत्पादन सुरू गरेको हो ।
हालै बिक्री सुरू भएको सिमेन्टले चाँडै नै उपभोक्तको मन जित्‍ने घिमिरेको विश्वास छ । निर्माण क्षेत्रमा यी दुई ग्रुपलाई उपभोक्ताले रुचाएको उल्लेख गर्दै दुई ग्रुपमा रहेको जनविश्वासका कारण सिमेन्ट चाँडै नै नेपालको नम्बर १ बन्‍ने घिमिरेको दाबी छ ।
उनै घिमिरेसँग बाह्रखरीका रोविन पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
रिद्धिसिद्धि कस्तो सिमेन्ट हो ?
रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट शंकर ग्रुप र अम्बे ग्रुपको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन भएको कम्पनी हो । कम्पनीको स्थापना २०७३ सालमा भएको हो भने उत्पादन केही समय अघिबाट सुरू भएर बिक्री वितरण भइरहेको छ । हाम्रो कारखानाको उत्पादन क्षमता प्रतिदिन ३ हजार मेट्रिक टन रहेको छ । हामी आफ्नै खानीबाट चुनढुंगा निकालेर अत्याधुनिक युरोपियन प्रविधिमार्फत सिमेन्ट उत्पादन गर्छौं ।
नेपाली सिमेन्ट उद्योग आत्मनिर्भर बनिसकेको छ । यहाँको मागअनुसार अरु प्रतिस्पर्धी सिमेन्टले सिमेन्ट बेचिरहेका छन् । यस्तोमा बजारमा आफ्नो सिमेन्टको बिक्री बढाउने तपाईंहरुको योजना के छ ?
आजको दिनमा नेपाली उत्पादनले बजारको माग धान्‍न सक्छ । पहिले क्लिंकर भारतबाट आउँथ्यो, आज क्लिंकरमा पनि आत्मनिर्भर हुन थालेको छ । नेपालको अहिलेको युग विकास निर्माणको युग हो । संसारको जुनसुकै देशसँग तुलना गर्दा पूर्वाधार विकासको हिसाबले हामी धेरै पछाडि छौं । यसको अर्थ बृहत मार्केटले अझै धेरै सिमेन्ट माग गर्नेछ । सिमेन्टको बजार पनि बढ्छ, त्यसकारण सिमेन्ट फ्याक्ट्रि आइरहेका छन् ।
जसले गर्दा सिमेन्ट उत्पादक आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । उत्पादन बढेसँगै मार्केट साइज पनि बढिरहेको छ । किनकी सिमेन्टबिनाको विकास निर्माण सम्भव नै छैन ।
नेपाली सिमेन्ट उद्योगको बजार नेपाल मात्रै हो ?
आजसम्म नेपालबाट भारतसम्म सिमेन्ट निर्यात भएको छैन । आजसम्म नेपाल आत्मनिर्भर नभएका कारण हामी निर्यात गर्न सकेका थिएनौं । उत्पादन बढेको अवस्थामा उत्पादकहरुले निर्यात गर्ने मौका पाउनेछन् ।
नेपालमा उत्पादन भएको सिमेन्टले भारतीय गुणस्तर ‘मिट’ गर्न सक्छन् ?
नेपालको सिमेन्टले भारतको गुणस्तर मिट गर्न नसक्ने कुरै हुँदैन । नेपालको सिमानाबाट ३ सयदेखि ४ सय किलोमिटरसम्म उत्तर प्रदेश र बिहारमा चुनढुंगाका खानी छैनन् । हेटौंडामा उत्पादन भएको सिमेन्ट त्यहाँबाट ३ सय किलोमिटरको दुरीमा रहेको पटना सहज रुपमा पुग्‍न सक्छ । त्यहाँ अहिले यत्तिकै दूरीबाट सिमेन्ट आइरहेको छ । गुणस्तरमा कुनै समस्या छैन ।
गुणस्तर ‘मिट’ गर्ने भए यहाँका ठूलो आयोजनाले विदेशबाट सिमेन्ट किन आयात गरिरहेका छन् ?
अहिले ठूला आयोजनाले विदेशी कम्पनीको सिमेन्ट प्रयोग गर्ने प्रचलन धेरै मात्रामा घटिसकेको छ । अर्को कुरा ठूला आयोजनाले ५३ ग्रेडको सिमेन्ट माग्‍ने गर्छन् । तर, दुर्भाग्यवश नेपाल गुणस्तर अनुसार सिमेन्टको बोरामा ग्रेड लेख्‍न पाइँदैन । जबकि भारतका बोरामा ग्रेड लेख्‍न पाउँछन् । उताबाट आउने ठूलाठूला आयोजना यही कारण देखाउने गरेका छन् । त्यो पनि काफी मात्रामा कम भइसकेको छ । यसको लागि नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागले पनि आफ्नो तर्फबाट सायद कार्य गरिरहेको होला । तर, यहाँको आयोजनाले स्वदेशी सिमेन्ट प्रयोग नगुर्नको कारण गुणस्तर नपुग्‍नु होइन ।
आजसम्म हामी नै यहाँको मागअनुसार सिमेन्ट उत्पादन गर्ने सक्ने अवस्थामा थिएनौं । अब बल्ल मागअनुसारको आपूर्ति गर्न सकेका छौं । अब केही होला ।
नेपालको खपत र माग कति हो ?
अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा प्रतिवर्ष २० करोड बोरा (१ करोड मेट्रिक टन) सिमेन्ट खपत हुने गरेको छ । यो वर्षभित्र नेपाल सबै माग धान्‍न सक्षम हुनेछ । यसमा रिद्धि सिद्धि सिमेन्टले पनि योगदान गर्नेछ ।
रिद्धि सिद्धि सिमेन्टको योजना के छ ?
हामी १ वर्षभित्र नेपाली सिमेन्ट बजारको ओपीसी सेग्मेन्टमा मार्केट लिडर बन्‍ने छौं ।
ओपीसी र पीपीसीको भिन्‍नता आम नेपालीमा बुझाइदिनोस् न !
ओपीसी अर्थात् अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट र पीपीसी भन्‍नाले पार्टल्यान्ट पोजोलोना सिमेन्ट । साधारण भाषामा ढलान गर्ने सिमेन्ट ओपीसी र वाल लगाउने सिमेन्ट हो पीपीसी । रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट ओपीसी सिमेन्ट हो । भविष्यमा पीपीसी सिमेन्ट पनि उत्पादन गर्ने योजनामा छौं ।
गुणस्तरमा अरुभन्दा भिन्‍न र उत्कृष्ट भएको तपाईंहरुको दाबी छ । यसका आधार के छन् ?
हामीले रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याब प्रयोग गरेर उत्पादन गरेका हौं । यो प्रविधि प्रयोग भएको नेपालमा पहिलोपटक हो । भारतमा पनि सिमित उद्योग मात्र यो प्रविधि प्रयोग भएको छ ।
हाम्रो उद्योगमा रोबोटले चौबिसै घण्टा कन्टिनिअस रुपमा गुणस्तर परीक्षण गरिरहेको हुन्छ । जुन अरू उद्योगभन्दा यसकारण फरक छ कि स्याम्पल म्यानुअल रुपमा उठाएर परीक्षण गरिन्छ ।
अरु उद्योगमा चुनढुंगादेखि क्लिंकर हुँदै सिमेन्ट बन्‍ने क्रममा परीक्षण गर्ने काममा मानवीय साहारा लिइन्छ । हाम्रो उद्योगमा यी सबै काम रोबोटले गर्छ । यसमा मानवीय त्रुटी हुने सम्भावना शून्य रहन्छ ।
आजको दिनमा सिमेन्टको गुणस्तर राम्रो-नराम्रो भन्दा पनि गुणस्तरको एकरुपता महत्वपूर्ण हुन्छ । कुनै बेला एकदम राम्रो गुणस्तरको सिमेन्ट निस्किन्छ भने कुनैबेला एकदमै कमसल । हाम्रो सिमेन्ट त्यस्तो हुँदैन । गुणस्तर तलमाथि हुनेबित्तिकै रोबोटले सुचना पुर्‍याइहाल्छ र गुणस्तर सुधार भइहाल्छ ।
सिमेन्टको आयु औसतमा तीन महिनामात्र हुने गर्दछ । त्यसमा पनि चिसोपनाले सिमेन्टको गुणस्तर उत्पादन गरेको अवस्थाभन्दा खसकाउँदै जान्छ । त्यसका लागि हामीले नयाँ प्रविधि अपनाएका छौं, लेजर सिल मेथड ।
लेजर सिलले बोराभित्र हावा छिर्न दिँदैन । किनकी लेजर सिलको प्रयोगले सिमेन्ट बोरामा हाल्न प्रयोग गरिने दुलो टालिन्छ । यसअर्थमा चिसोपन छिर्दैन भने सिमेन्टको तौल घट्ने वा चोरी हुने क्रम पनि बन्द हुन्छ । यसका अलवा हामीले भीआरएम प्रविधि पनि अपनाएका छौं ।
तपाईंको भनाईको तात्पर्य अन्य सिमेन्टको तुलनामा रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट नेपालको नम्बर १ ओपीसी सिमेन्ट हो ?
दुईवटा कारणले सिमेन्टलाई राम्रो बनाउँछ । पहिलो चुनढुंगाको गुणस्तर र दोस्रो हो, सिमेन्ट बनाउँदा प्रयोग हुने प्रविधि । हाम्रो आफ्नै खानी छ । त्यहाँ हाइग्रेड चुनढुंगा छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम लगभग अन्तिम चरणमा आएपनि तिव्र गतिको विकास निर्माण कार्यले सिमेन्टको माग बढी नै रहन्छ । तर, नेपाली बजारमा पहिलो नम्बरमा आउने तपाईंहरुको सपना पूरा गर्न केही चुनौती होलान् । उपभोक्ताको रोजाइमा यो सिमेन्ट पर्ने आधार के छन् ?
मैले पहिले नै भनें । नेपालको बजार विस्तार हुँदैछ । यो सिमेन्ट उत्पादन नेपालमा निर्माण सामग्री उत्पादनमा स्थापित दुई समूहले सुरू गरेको हो । हामी पहिले नै बजारमा छौं । बजार पहुँच हाम्रो लागि समस्या पनि छैन । हामी यसअघि पनि गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन गर्दै आएका छौं । उपभोक्तालाई हामी गुणस्तरमा कुनै कम्प्रोमाइज गर्दैनौं ।
हामीसँग लामो समय काम गरेको व्यापार साझेदार छन् । हामीले राम्रो उतपादन दिने कारण हामीलाई उपभोक्ताले चाँडै मन पराउनु हुनेछ । यसकारण हामी नम्बर १ बन्‍ने आधार उत्पादनको गुणस्तर र कम्पनीको प्रोफाइल हो ।
हामीले दाबी गरेअनुसार उच्च प्रविधि प्रयोग गरेर गुणस्तरीय सिमेन्ट प्रयोग गरेका छौं । तपाईंले निर्धक्क रुपमा रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।